မောငျ(စှယျစုံကမျြး): July 2013
ISP Tracer 3.0 (33 KB)
ဒါကတော့ IP သိရုံနဲ့နေထိုင်တဲ့တိုင်းပြည် လူမျိုး မြို့နယ်...စသည့် စသည့်တို့ကိုပါသိရှိစေနိုင်တဲ့ Software လေးပါ။
Download isp Tracer
Author Unknown at 9:44:00 PM0မှတ်ချက်
Social Media Widget With Rss Subscribe Box လေးနဲ့အလှဆင်မယ်
အားလုံးဘလော့ခရီးသည် မိတ်ဆွေများ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေဆိုတာ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါရစေ
ခုတင်တဲ့နည်းပညာလေးကတော့ မိမိတို့ဘလော့ရဲ့ လှပသေသပ်ပြီး ဘလော့ကိုလှစေတဲ့
Social Media Widget With Rss Subscribe Box လေးထည့်နည်းပါ
ထည့်နည်းလေးနဲ့ လိုအပ်မဲ့ ကုဒ်တွေကို အောက်မှာ ယူထည့်လိုက်ပါနော်..
Author Unknown at 11:12:00 PM0မှတ်ချက်
Author Unknown at 11:08:00 PM0မှတ်ချက်
Author Unknown at 5:54:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: *M.H.A* ရေးသော ကဗျာတိုများ
ကဲဗျာ ထူးထူးဆန်းးဆန်းး သူများက ကြောက်ပါတယ်ချိုတာ တူကလုပ်ချလိုက်တယ်... ဗိုင်းရပ်စ်များနဲ့တောင် ကခုန်မယ်ချိုဘဲ...တွားးးးးးးးးးးလူချိုးးးးးေိေိေိ.....
ကဲ လေ့လာ မှတ်သားလို့ရတာပေါ့ ဒေါင်းးထားကြမယ်နော် စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းးတယ်.....
Author Unknown at 2:19:00 PM0မှတ်ချက်
Author Unknown at 2:18:00 PM0မှတ်ချက်
Author Unknown at 12:46:00 AM 1 မှတ်ချက်
Facebook ကို Shortcuts နဲ့သုံးမယ်
ကျနော်တို့ Facebook သုံးတဲ့အခါ Mouse သုံးပြီး ရွှေ့ရတာ ရိုးတယ်..ကြာတယ်ထင်ရင် Shortcuts သုံးလို့ရပါတယ်ဗျ။
ကျနော်လည်း ဒီနေ့မှ သိလို့ ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ။
ALT + Shift + 8 Go to the Facebook page
ALT + 8 Go to the Facebook page
>>နံပါတ်တွေကတောု့keyboard ပေါ်မှာရှိတဲ့ နံပါတ်တွေပဲရတယ်ဗျ...Num Lock နဲ့သုံးရတာ ဆို မရဘူးဗျ<<
Author Unknown at 11:13:00 PM0မှတ်ချက်
*** အချစ်ကို ကစားစရာလို့ထင်သူသို့***
ငါနဲ့တွေ့ခိုက် နင့် မာနလေးတွေ
အချစ်ကို တော့ ခံစားတတ်ပါတယ်...
လွမ်းနေပေမယ့် နင်ကတော့ ငါ့ကို
နင့်လို မိန်းကလေးနဲ့ နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်
Author Unknown at 10:14:00 PM0မှတ်ချက်
နည်းပညာဝါ သနာပါလွန်းလို့ 
မသိသေးသူတွေ ခရီးရောက်စေဖို့ 
အပြစ်တင် အပြစ်မြင်ပြီး မရှုံချ မလှောင်ပြောင်ပါနဲ့ 
လူအများကောင်းစားစေဖို့ ရေးသားလို့ နေပါစေ
သင်ဟာ ပညာသင်တွေအပေါ် ပညာရှင်ကောင်းပီသတဲ့သူ..........။
မပေါက်မမြောက် အတွေးစကားလေးတွေနဲ့ 
လေ့လာရှာဖွေ ပညာဝေနေသူများတွေ့ ပါက
မလှောင်ပြောင် မရီမောလိုက်ပါနဲ့ ..
ဖြည့်စွက်ရေးသား အတွေးမမှားစေဖို့ 
သင်ဟာ ပညာရှိကောင်း ပီသတဲ့သူ .......................။
အနုပညာ ဂီတ ဗီဇမှာပါလာလို့ 
မြေစမ်းခရမ်းပျိုးရင်း ရေးစပ်သီဆိုနေသူတွေ့ ပါက
အပြင်းအထန်ကြီး မတော်တရော် မသရော်မိပါစေနဲ့ .....။
ထိထိရောက်ရောက် စည်းနဲ့ ဝါး တီးခေါက်မိသူဆိုရင်
ပိုလျှံနေတဲ့ အ၀တ်တွေ မစားလည်းဖြစ်တဲ့ အစားတွေ
အညတရ လူဆင်းရဲတွေကို ပေးကမ်းထောက်ပံ့ပါ
သင်ဟာ စိတ်ရောလူရော ချမ်းသာတော့မယ်လူ
တစ်ရယ် နှစ်ရယ်ပေါင်း သုံးဆိုတာ သိခဲ့ရင်
Author မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) at 7:57:00 PM3မှတ်ချက်
Labels: မောင် ရေးတဲ့ကဗျာ များ
Author မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) at 5:17:00 PM0မှတ်ချက်
Author Unknown at 10:43:00 PM0မှတ်ချက်
☆♥ ဇရာ၏ဒဏ် ☆♥
အသက်ကြီးပြန်တော့ ပျက်စီးမယ့် ကိုယ်ခန္ဓာ
နှောက်ယှက်တဲ့ ဘေးဆိုးးး.........။ .........။
Author Unknown at 10:42:00 PM0မှတ်ချက်
Author လမင်းချစ်သူ at 7:22:00 PM0မှတ်ချက်
Labels: အိအိကျော်ဇင် ရေးတဲ့ ကဗျာများ
ဆုံနိုင်ခွင့် မဲ့ 
Author လမင်းချစ်သူ at 7:21:00 PM0မှတ်ချက်
Facebook နောက်ဆုံးထွက် Version 3.5 လိုချင်သူများ ဒေါင်းလုပ်ယူလို့ ရပါပီ
Download -Facebook 3.5 - 22 -7-2013 Update
Author မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) at 6:17:00 PM 1 မှတ်ချက်
Labels: Facebook ဆိုင်ရာ နည်းပညာများ, Phone အတွက် Facebook
Author Unknown at 8:57:00 PM0မှတ်ချက်
Author Unknown at 8:46:00 PM 1 မှတ်ချက်
Computer တစ်လုံးကို အဝေးက လှမ်းပြင်ဖို့သုံးတဲ့ TeamViewer 8 Full Version with Crack File
Download - Team viewer 8.0 with Crack
Author Anonymous at 6:09:00 PM2မှတ်ချက်
မေမေ သိအောင်ပြောပြရအုံးမယ် မေမေ
ဘယ်သူချယ်မှုန်းလို့မှ မှီမယ်မထင်ပါဘူး မေမေ။
မြူးကြွသူယာလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ တေးဂီတတွေ
ဟစ်ဟော့ ဒီဂျေ တွေဆိုတာတွေလေ
သင်းပျံ့မွှေးကြိုင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတဲ့ ရနံ့လေးပေါ့
ကိုယ်သင်းရနံ့လောက်မျှပင် မသင်းပျံ့ခဲ့ပါဘူး မေမေ။
သည်ကဗျာလေးကတော့ ကျနော်သိပ်ချစ်တဲ့ မေမေအတွက်
ရည်ရွယ်ပြီး အဝေးတနေရာကနေ ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။
Author Unknown at 11:41:00 PM 1 မှတ်ချက်
ပေါင်းစပ်ခြင်းလို့ ကို ယုံကြည်ခဲ့တယ်
ပျော်၇ွှင်မှုလို့ ကို ယူဆမိခဲ့တယ်
အကြင်နာတွေကို ကို မျှော်လင့်ခဲ့၇တယ်
ကို့ ရဲ့ ..... မျှော်လင့်ခြင်း
ပျော်ရွှင်မှု အလင်းတန်းတွေ ပေးခဲ့တယ်
ကို့ နှလုံးသားကမ္ဘာ သာယာနေခိုက်
နေမင်း အတာ ပုံးကွယ်ကာသွားချေပြီ
ကို ချစ်တဲ့ နေမင်းအတာ
ကို့ အတွက် ပြန်လာစေခြင်ပါသည်။
ပြန်လာပါ နေမင်း အတာ
2/11/2011 ရက်နေ့တွင် ခံစားစပ်ဆိုခဲ့သည်။
Author Unknown at 11:22:00 PM0မှတ်ချက်